Geofeedia: Fanaraha-maso ny haino aman-jery sosialy, hakingan-tsaina ary famakafakana araka ny toerana | Martech Zone
Geofeedia: Fanaraha-maso ny haino aman-jery sosialy, faharanitan-tsaina ary famakafakana isaky ny toerana
Sabotsy, Janoary 24, 2015 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Geofeedia dia sehatra manana patanty izay azon'ny mpivarotra ampiasaina hanaraha-maso sy hamakafaka ny media sosialy miorina amin'ny toerana. Ity dia mety ho tetika marketing mahasoa indrindra ho an'ny fitantanana laza, na ho an'ny paikady fandraisana an-tanana. Angamba mpanome tolotra ianao na manana solontena serivisy marobe amin'ny faritany voafaritra - azonao atao ny manara-maso ny fivezivezena amin'ny tambajotra sosialy rehetra voalaza na ho an'ireo mpanjifa ho avy mitady fanampiana.
Endri-javatra sy tombontsoa azo avy amin'ny Geofeedia
Monitor - Angony ary tahirizo ny atiny media sosialy avy amin'ny faritra voafaritra.
Filter - Amboary ny valin'ny fikarohana amin'ny teny lakile, mpampiasa, andro, ora, loharano media sosialy sy maro hafa.
sary an-tsaina - Ny fijerin'ny sarintany dia mampiseho ny toerana marina misy ny atiny, ny sary an-tsary dia mampiseho anao ny fotoana sy ny filaharan'ny lahatsoratra ary ny streaming mivantana dia mampiseho atiny vaovao amin'ny fotoana tena izy avy amin'ny toerana maro amin'ny efijery tokana.
Fakafakao - Ny angon-drakitra voatahiry ho ahy hamantarana ireo fironana teny lakile, hetsika miorina amin'ny fotoana, peta-drindrina manan-kery, fironana hetsika, loharanom-baovao sosialy ary maro hafa.
Archive - Tehirizo ao amin'ny foibe angona angon-drakitra momba ny fitadiavana sy famakafakana amin'ny ho avy.
Export - Geofeedia dia manolotra API feno fisongadinana, fanondranana CSV, widgets azo ampidirina ary fanondranana angona RSS amin'ny endrika ATOM, GeoRSS na JSON.
fanairana - Raiso ny fanairana mailaka mandeha ho azy amin'ny fotoana tena izy miorina amin'ny teny fanalahidy na solonanarana.
translate - Handika ny valin'ny fikarohana saika amin'ny fiteny rehetra amin'ny tsindry tokana.
Mamorona fari-tany voafetra ho an'ny fangatahanao media sosialy
Zahao ny Query Media-based Query amin'ny alàlan'ny Collage
Fakafakao ny haino aman-jery sosialy miorina amin'ny toerana
RTS - Sarin-tsarintany
Fandraisana an-tsoratra Analytics & sentiment
Influencers - Fijerena collage
Raha te hahalala misimisy kokoa momba ny fikendrena ara-jeôsialy dia ampidino ny whitepaper-ny, "The Geosocial Marketer's Roadmap", anio.
Sintomy ny Tondrozotra Geosocial Marketer's
Tags: media sosialy arisivaGeogeofeediafaritrafanairana amin'ny haino aman-jery sosialytsaokafamakafakana media sosialy miorina amin'ny toeranahaino aman-jery sosialy miorina amin'ny toeranafanairana amin'ny media sosialyfahana amin'ny media sosialyhaino aman-jery sosialyfanaraha-maso ny media sosialy
Ny fahafantarana ny fomba hanampian'ny karama isan-tsindry ny fikarohanao Organika
PollSnack: Mamorona Poll tsotra sy namboarina amin'ny Facebook